शेखर कोइरालामाथि खनिए मोहन बस्नेत, लगाए गम्भिर आरोप (भिडियोसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
शेखर कोइरालामाथि खनिए मोहन बस्नेत, लगाए गम्भिर आरोप (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २२ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले देउवाको विरोध गर्नेको कडा आलोचना गरेका छन् । प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको कार्यक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ मा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले देउवाविरोधीको कडा आलोचना गरेका हुन् ।
बस्नेतले यही मंसिर २६ गते बस्दै गरेको बैठकको एजेन्डा पनि सुनाएका छन् । उनकाअनुसार उक्त बैठकको मुख्य एजेन्डा भनेको भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनको समीक्षा र पार्टीका भ्रातृ र शुभेच्छुक संघ संस्थाको अधिवेशनका सम्बन्धमा छलफल गर्ने हो ।
शेरबहादुर देउवा सभापति भएपछि पार्टी लथालिंग भयो भनेर डा। शेखर कोइरालाले भन्नुभयो नि रु भनेर पत्रकार ऋषि धमलाले सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘डा। शेखर कोइरालाको पार्टीभित्र कुनै लगानी नै छैन । लामो समय जोगिर खाएको बसेको मान्छे । अहिले उहाँलाई सभापति हुने रहर छ । अनि शेरबहादुर देउवालाई गाली गर्ने शिवाय उहाँको ड्युटिनै छैन । प्रजातान्त्रिक पार्टीमा यस्ता कुराहरु राख्न पाइन्छ ।’
उनले आगामी पार्टीको महाधिवेशनमा पनि वर्तमान सभापति देउवा नै सभापति बन्ने दाबी गरे । उनले भने,‘अबको सभापति पनि देउवाजी नै हो । उहाँभन्दा राम्रो मान्छे हाम्रो पार्टीमा अरु कोही पनि छैन् । उहाँले नै हो पार्टीलाई यो उचाईमा ल्याउनुभएको ।
प्राविधिक तालिम तथा सीपबारे श्यामजी कँडेलको हेर्नैपर्ने भिडिओ
काठमाडौं, १८ साउन । कान्तिपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयका कार्यकारी निर्देशक श्यामजी कँडेलले आफूहरुको संस्थाले तालिम दिने
प्रधानमन्त्री ओली मेरो मनपर्ने नेता, उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ : गायक कार्की (भिडिओसहित)
नेपालमा कोरोना किन बढ्यो ? यसो भन्छन् डा. दिक्षित (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १७ साउन । जनस्वास्थ्यविद् डा. समिरमणि दिक्षितले नेपालमा कोरोना परीक्षण नभएकोले संक्रमितको संख्या अझै
हरिबोल गजुरेलको टिप्पणी : स्थायी कमिटीको बैठक लम्ब्याएकोमा जनताले मन पराएका छैनन् (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १७ साउन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा
केपी ओलीमा संगठन सञ्चालनसम्बन्धी ‘स्किल’ छैन् : रामचन्द्र झा (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १६ साउन । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र झाले
पशुपतिनाथको कसम खाँदै मिनबहादुर गुरूङले भने : ‘भाटभटेनीमा प्रचण्डको लगानी छैन’ (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १६ साउन । भाटभटेनीका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक मीन बहादुर गुरुङले भाटभटेनीमा पूर्व प्रधानमन्त्री
रञ्जन कोइरालाले खोले आफूले गोली खाएको विषय (भिडियोसहित)
काठमाडौं, १५ साउन । पत्नी हत्यामा दोषी ठहर भई साँढे आठ वर्षपछि रिहा भएका पूर्व
दुधको मुन्टा राम्ररी सफा गरेर मात्र शिशुलाई स्तनपान गराउन आग्रह